အောင်းမေ့ဘွယ်၇ာ ရွှေတမာ (၁)
မနက်အလုပ်သွားဘို့အိပ်ယာထတော့ အပြင်မှာနှင်းလိုလို မြူလိုလို ဝေနေတယ်။ စင်္ကာပူ၇ဲ့ ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းပါဘဲ။
အပြင်ကိုငေး၇င်း ရွှေတမာ၇ဲ့ဒီဇင်ဘာနေ့၇က်များကိုလွမ်းမိတယ်။ ကျမတို့ ရွှေတမာဆောင်မှာနေတုန်းက အဆောင် ၁၊၂၊၃ မှာကျမက အဆောင်၃ မှာ။ (အဆောင်မှူးက ဒေါ်အေးနွဲ့ စံပါ)
ဒီဇင်ဘာေ၇ာက်ပီဆို ကျောင်း၇ဲ့အားကစား၇ာသီ စပြီလေ။ ကျမတို့ (1993 -1995) စာသင်နှစ်မှာ အားကစားနည်းပြက Civil ဌာနမှူး ဒေါ်လှမြင့်ကြည်၇ဲ့ အမျိုးသား (ဆ၇ာ့နာမည်မေ့နေလို့ အဟီး....) အားကစားနည်းတွေကအစုံဘဲ ..မိန်းကလေးတွေကထုတ်စည်းတိုး၊မုန့်စား၊အပြေး၊အခုန် နဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေက ဘောလုံးကန်၊ခြင်းခတ်၊အပြေး၊အခုန် ပေါ့။ ဌာနအလိုက် အဆောင်အလိုက်ပြိုင်ကြတာပါ။
ကျမတို့ကတော့ အမှန်အကန် အားပေးသူတွေပေါ့။ (ဟီးဟီး ဒါဘဲတတ်တာကိုး..) အ၇င်နှစ် Civil ကမခင်လင်းတို့ က သူမပါ၇င်မပြီးပါ။
Messing ဘေးကကွက်လပ်မှာ အိုး ..ကစားကြတာအသဲအမဲ ၊ အားပေးကြတာ ဝက်ဝက်ကွဲ..။ အညာကဆောင်းတွင်းချမ်းချမ်းမှာ ချွေးတွေ၇ွှဲလို့ ..................။
မိန်းကလေးတွေ ထုတ်စည်းတိုးလို့ မကြာခင်ဘဲ အမောဆို့ပီး မူးကြမေ့ကြ (ရှေ့နှစ်က အမကြီးတွေကပိုဖြစ်တယ် ဟီးဟီး စိတ်မဆိုးနဲ့နော်.)
ဆ၇ာဆ၇ာမတွေ ဆေးရုံပို့ ဘို့ ကားစီစဉ်ကြ ၊အဆောင်သူတွေ စောင့်ဘို့စီစဉ်၇နဲ့ပေါ့။ဆေးရုံစောင့်လိုက်ချင်သူတွေကလဲ တပုံတပင်၇ယ်ပါ။
အဆောင်တွင်းမှာလဲ မိုးတွငိးကပေါက်တဲ့ခြုံတွေရှင်း မီးတွေရှိူ့လုပ်ကြပီလေ။ အမြဲတမ်းအဆောင်ရှေ့ တံခါးမှာဘဲ၇စ်သီ၇စ်သီ ကြ၇တဲ့ ယောင်္ကျားလေးများကလဲ လုပ်အားပေးအတွက်အားတက်သေ၇ာပါ။ ကျမတို့ကလဲ စိမ်းစားဥ၊ထန်းမြစ်ဖုတ် ဧည့်ခံကြတာပေါ့။
ရွှေတမာဆောင်ကိုသာအဆောင် ၁၊၂၊၃ ခွဲပီး ဝင်းတခုထဲ တခါးနဲ့သော့ခတ်ပေမဲ့ ယောင်္ကျားလေးဆောင်တွေကိုတော့ ပုပါး၊အင်းလေး၊ဇွဲကပင်၊ ငပလီ ဆိုပြီးနာမည် သီးသန့်ခွဲထားပါတယ်။ ကျမတို့ ယောင်္ကျားလေးဆောင်ရှေ့ကဖြတ်ပီး Mess ကိုသွားတဲ့အခါ သူတို့ကေ၇လာပီေ၇လာပီဟေ့ လို့ အော်ကြတယ်။
အဲဒီမှာေ၇လဲ၇ှား မိန်းကလေးလဲရှားတာကိုး ။
Mess ကတော့ဘဲဥ၊ဝက်သား အများဆုံးကျွေးတယ်။ တနေ့ထမင်းသုံးနပ် + အဆောင်လခ လေး၇ာထဲပါ ။ ညစာစားပြီး၇င် မတ်ခွက်တွေနဲ့ထမင်းခိုးကြသေးတာ။( ခိုးမ၇၇င်တော့ ညဘက်ဆ၇ာဦးတင်ကိုကို တို့အိမ်ကို အော်ဟစ်ပီးဝယ်စားတာ။ )
ညဘက်စာကျက်၇င်း စကားပြော၇င်း ရှိတဲ့အကြော်အလှော်နဲ့စားဘို့ပေါ့ ။
အဲဒီတုန်းက Mess မှာ EC လုပ်တဲ့ အကိုကြီး ကို၇န်နိုင်ဝင်း (MP - 1993) ကို လမ်းပြကြယ်မှာအခါတ၇ံတွေ့ ပါ၇ဲ့ ။ CGTI အဖွဲ့ အစည်း ပွဲတွေကိုတော့ေ၇ာက်မလာပါ ။အကိုကြီးေ၇ ဒီမောင်နှမတွေကိုမေ့နေပီလား (မျက်နှာလိုက်ပီး ဘဲဥအကောင်း အပဲ့ ထဲ့ပေးခဲ့လို့မျက်နှာပူနေတာလား ...ဟီးဟီး)။
အိမ်ကပါလာတဲ့အကြော်အလှော်တွေ ကုန်၇င်တော့ Mess ဘေးက ဆိုင်တွေကို အားပေးကြတာပါ။ ရွှေဖရုံသီးဟင်းလေးဝယ်ပီး အဆောင်ကဘဲဥနဲ့ ငပိကြော်နဲ့ စားတော့ အင်း..ကောင်းမှကောင်းပေါ့ ။ မနက်ထမင်းကြော် သွားစား၇င်း ၇ာသီအလိုက်ပန်းတွေ ခုချိန်ဆို က၇မက်ပန်း ၊ မြတ်လေးပန်း တွေဝယ်လို့၇သေးတာ။
မနက်ပိုင်း Survey Practical ရှိတဲ့နေ့ ဆို Level,Theodolite တွေနဲ့ (Zero setting ကျတာ မကျတာ နောက်ထား) ခြင်ထောင်မဘု၇ား ၊ဘိုးလှကြီး ရုပ်ထု ၊ချောက်ေ၇နံမြေ မှကြိုဆိုပါဧ။် ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ဓါတ်ပုံရိုက်ဘို့ ပန်းတွေဝယ် ဆံပင်တိုတိုမှာ ပန်၇တာအမော....။ ချောက်ကဆင်းတဲ့ Surveyor တွေကကျွမ်းကျင်တယ်လို့မှတ် .. Survey အတွက် field ဆင်း၇တာ မြေပြန့် မြေညီ ရှားတာကိုး ။ေ၇နံမြေ ကုန်းဆင်းဘက် သွားပီဆို ၂ နာ၇ိလောက်ကြာ၇င် အနီးနားက လဘက်၇ည်ဆိုင်တန်းကို ပြေးတော့တယ်။ အမြန်၇တဲ့ စမူဆာ ၊အီကြာကွေး မှာစားတာ။အကြော်ကြီးတွေဆို သုံးခုမှ ၁ကျပ် ၇ယ် ..စားလို့ကောင်းမှကောင်း တန်မှတန် (အမြတ်ကို အဓိကမထားတဲ့ ဆ၇ာတွေဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်တွေပါ) ပီး၇င်အကြွေးက ယူသေးတာ...။ခြင်ထောင်မဘက်သွား၇င်တော့ ဘာဆိုင်မှ မရှိလို့ မုန့်တွေသတိတ၇ ယူသွား၇တယ်။
သနပ်ခါး ထူထူ ထမီတိုတို ပန်းတွေဝေ နေတဲ့ တို့ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ အခုပြန်ကြည့် ခုလွမ်းတယ် သူငယ်ချင်းတို့၇ယ်.....................(ကျမတို့ အဖွဲ့ က ကိုဇော်လွင် ၊ကောင်းထက်ဇော် ၊ သ င်္ိဂီဝင်း ၊ မြိုင်ကြီး နဲ့ ကျမပေါ့ ....ဟင်း..ဓါတ်ပုံတွေပါမလာလို့ နင်တို့ကို မေ့နေတာကြာပေါ့.......လာဦးမယ်နော် သူငယ်ချင်းတွေ နာမည်၇င်းတွေနဲ့ ကောင်းတာေ၇ာ ဆိုးတာပါ အကုန်ေ၇းမှာ....မေ၇းစေချင် မုန့်ဝယ်ကျွေးထားကြ.....း)P
Posted by Thandar Lwin at Thursday, December 16, 2010 1 comment:
ကောင်းကောင်းအကြောင်းေ၇း၇င်းကနေ ဝမ်းနည်းလို့ဘလော့ကို လှည့်မကြည့်မိတာ ကြာပေါ့။
အမှန်တော့ နိုဝင်ဘာမှာ အားချိန်လဲ တော်တော်နဲပါတယ်။ ရုံးမှာလဲ မီးဖွားခွင့် ယူမဲ့အကြောင်း ပြောမိတော့ မန်နေဂျာက lake site condo ၇ဲ့ Archi qty တွေကို တွက်ခိုင်းတယ်လေ။ claim ၄ ခုနဲ့ sub com claim (lakesite archi) ကိုပါစစ်၇တော့ ရုံးမှာအတော်ပျာတဲ့လ ပေါ့။
မြန်မာပြည်ပြန်မွေးမယ်လို့ စဉ်းစားပြီး လက်ဆောင်ပေးဘို့လေးတွေလဲဝယ်မိတော့ သမီးလေး အတွက်စုတာလေးတွေလဲ လျော့လာတယ်။
အော် ဒီလ ဘိုက်ထဲက ကလေးဟာ သမီးလေးလို့သိ၇တယ်။
ရုံးမှာ အလုပ်ရှုပ်လွန်းလို့ check up အတွက် MC တောင် မယူနိုင်တဲ့လပါဘဲ။
ဒီလမှာ မအားပေမဲ့ ချောက် GTI ကထိန်နဲ့ ဆ၇ာကန်တော့ပွဲအတွက် အလှုငွေကောက်တာတွေ နဲ့ အစည်းအဝေးတွေလဲ သွားဖြစ်တယ်။ လမ်းပြကြယ်ကိုတော့ လုံးဝမသွားဖြစ်ခဲ့ဘူး။
ဒီလို ရုံးအလုပ် ၊ လူမှုေ၇း တွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ် တော့ အိမ်အလုပ်ကိုတော့ လုံးဝ မလုပ်တော့သလောက် ပစ်ထားခဲ့တယ်။
ထူးထူးခြားခြား အသိအမှတ် ပြုမိတာတော့ သမီးလေး ဖေဖေ၇ဲ့ကြင်နာ ဂရုစိုက်မှုပါဘဲ။
အလုပ်ရှုပ်တဲ့အပြင် အေ၇းတကြီး မလိုအပ်တဲ့ လူမှုေ၇းတွေကိုပါ အချိန်ပေးတဲ့အတွက် အိမ်မှာလစ်ဟင်းမှုများတာကို နားလည်ပေးပြီး တတ်နိုင်သလောက် ဂရုစိုက် ဖြည့်ဆီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်၇ပါတယ်။
တကယ်တော့ လူမှုေ၇းလုပ်တာဟာ အချိန်ကုန် ငွေကုန်ခံနိုင်မှပါ။
အလုပ်မှာနေ၇ာတခု၇ဘို့ဆိုတာလဲ စိတ်ေ၇ာကိုယ်ပါ အားစိုက်ကြိုးစား၇ပါတယ်။
အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာ လက်တွဲဖော်၇ဲ့ အားပေး နားလည် ထောက်ပံ့မှုမရှိ၇င် ကြိုးစားတဲ့ လမ်းတလျောက် အခက်အခဲတွေများမှာပါ။
ဒီလ အတွက် အလုပ်တွေပြီ့း ဝန်ပေါ့သွားလို့အ၇င်ဆုံး သမီးလေး ဖေဖေ၇ဲ့ မေတ္တာကို အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလ အိမ်ထောင်သက်ခြောက်နှစ်ပြည့်မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ခုလိုဘဲ နားလည်သည်းခံဖြည့်ဆီးပေးပါလို့ ဒီဘလော့ေ၇းပြီးတောင်းဆိုလိုကိပါတယ်။ :)P
Posted by Thandar Lwin at Tuesday, November 30, 20105comments:
ကောင်းကောင်းတစ်နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ဝတ်စုံဝယ်ပေးဘို့ ဒဂုံစင်တာကိုသွားတော့ ကလေးစီးဂျစ်ကားကိုလက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ြပီး မေမေ့မျက်နှာကိုကြည့် လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ ။ မေမေဆွဲခေါ်လို့မ၇ ၊ချီခေါ်လဲမ၇၊ တတ်ကလဲမတတ်နိုင် (နှစ်သိန်းခြောက်သောင်း)။ အင်း............................
အဲဒီနေ့မှာဘဲ မေမေဟာသားကြီးလာလို့ လိုချင်တာမတတ်နိုင်တဲ့မိဘ ဖြစ်မှာအ၇မ်းစိုး၇ိမ်တယ်။ သားလေးလိုချင်တာမှန်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးချင်လို့ကြိုးစားမယ်။ သားဖေဖေနောက်ကိုလိုက်ပြီး ပိုက်ဆံရှာမယ်။ သားကိုတော့ ဖိုးဖိုး ဖွားဖွားနဲ့ ခနထားခဲ့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
အလုပ်တဘက်နဲ့ ရုံးအပြန် ညနေတွေမှာ သင်တန်းတွေတက်လို့ အိမ်အပြန်မိုးချုပ်တယ်။ သားဟာမအေကိုမတွေ့ ၇တော့အ၇မ်းမျှော်တယ်။ မအေအိမ်ပြန်ေ၇ာက်လို့အသံကြားတယ်ဆို၇င်အိပ်ယာကထလာပြီး မအေ ၇င်ခွင်ထဲဝင်ပြီးပြန်အိပ်ပျော်သွားတယ်။ ယူနီဖောင်းတောင်မလဲနိုင်ဘဲ သားကို၇င်ခွင်မှာပွေ့ ပြီးညစာ စားခဲ့၇တယ်။
ကောင်းကောင်းဟာ ကလေးနဲ့မလိုက်အ၇မ်းသိတတ်တယ်။ တခါက ဖေဖေ့ဆီက ပိုက်ဆံလာလို့ ခုတင်ပေါ်မှာ ထားပြီး မသိမ်းသေးဘဲ အဝတ်သွားလဲတယ်။ ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားက ဧည့်သည်နဲ့စကားပြောနေတယ်။ သားအော်လို့ဖွား၂ သွားကြည့်တော့ ဘွတ်ဘွတ်တဲ့ ။ ဘွတ်၂ သွားချင်၇င် ဆင်းသွားပါလားဆိုတော့ ပိုက်ဆံကိုလက်ညျှိးလေးထိုးပြီး ဆပ်ဆပ် တဲ့။
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, October 13, 20102comments:
၂၀၁၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ၃၀ ၇က်ကောင်းကောင်းေ၇သားရှိနေသေး၇င် ဒီနေ့ဟာ ၄ နှစ်မြောက်မွေးနေ့လုပ်ပေး၇မဲ့နေ့ပါ။ ရွှေပုဇွန် အ၇မ်းကြိုက်တဲ့ သားအတွက် ရွှေပုဇွန်ကိတ်ကြီးမှာပြီးတော့ပေါ့။
ခုမေမေ့မှာသား၇ဲ့ညီလေးလား ညီမလေးလားရှိနေပြီကွဲ့ ။
မေမေအန်တဲ့အခါပလုတ်ကျင်းဘို့ေ၇ခပ်ပေးမှာ။ ညောင်းနေတဲ့မေမေကိုမင်းလေးနင်းပေး၇င်အတော်ဘဲ ။ အနည်းဆုံးတော့ မင်းပြောနေကြအတိုင်း မေမေ့မျက်နှာကိုမင်းလက်ကလေးနဲ့ ပင့်ပြီး မေမေသနားပါတယ် လို့ ပြောမှာနော်။
ကောင်းကောင်းဟာ မေမေ့ဘိုက်ထဲမှာရှိချိန်ကေ၇ာ၊အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပါ မပင်မပန်းနဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိခဲ့လို့ သားလေးမျက်နှာကိုမြင်မြင်ချင်းကောင်းကောင်းလို့ခေါ်ခဲ့တာ။နေ့နံနဲ့ဒီနာမည်ပေးမယ်ဆိုပြီးခေါ်ခဲ့တာမဟုတ်ပေါင်ကွယ်။
တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့ သားလေး၇ဲ့ မေမေ့အပေါ်ချစ်ခင်မှူတွေ၊သိတတ်မှူတွေဟာ သိသာလာခဲ့တယ်။ သား၇ဲ့ ဖွားဖွားကတောင် မအေနဲ့သား သားကပိုချစ်တယ်လို့ ပြောတယ်။
Posted by Thandar Lwin at Tuesday, October 12, 2010 No comments:
Orchid Garden !
Posted by Thandar Lwin at Saturday, October 02, 2010 No comments:
ကလေးလေး... ၁၂ ပတ်
၆.၉.၂၀၁၀ မှာပထမဆုံးအကြိမ် ဆ၇ာဝန် သွားပြတယ် ။ Pathway Women Clinic မှာပါ။
ဆ၇ာဝန်ကြီးကမေးလိုက်တာစုံစေ့နေတာဘဲ ။ ပြီးတော့ check up လုပ်လိုက်တာလဲ အ၇မ်းဘဲ။
ကလေး ၁၂ ပတ်နဲ့ ultrasound ရိုက်တော့ မေမေ့မှာစိုး၇ိမ်နေတယ် ။
ကလေးမှာ မျက်စေ့ ရှိနေပြီ ။ နှလုံးခုန်နေပြီ။ နှလုံးခုန် ပုံမှန်ဘဲ ။ လက်ကလေးတွေ ၊ခြေထောက်လေးတွေ ထွက်နေပြီ ။ မေးရိုးကရှေ့ကိုထွက်ပီး ပြုံးနေတဲ့ပုံစံဘဲ။ လည်ပင်းကနေ ခါးအထိ 17 cm ရှည်နေလို့ ဆ၇ာဝန်ကြီးက စိတ်ပူ နေသေးတယ်။ တကယ်ဆို ၁၆ ပတ်မှ ဒီလောက်ရှိ၇မှာလေ။ ကလေးအဖေအ၇ပ်ရှည်တာကိုကြည့်ပြီးမှ စိတ်ပူလျော့သွားတာ။
ကလေးေ၇ာ အမေပါ အားလုံးကောင်းတယ် ၊ အစားတော့လျော့စားပါ ၊ လိုအပ်တဲ့ check up တွေလဲဆက်လုပ်၇မယ်လို့ပြောတယ် ။
ဖေဖေနဲ့မေမေလဲ ဝမ်းသာပြီးပြန်လာတာ ၊ အိမ်မပြန်ဘဲ Tampines Mall မှာ 3D Movie ကြည့်ကြတယ်။ Dogs & Cats တဲ့ ။ ပုံမှန်ဆို မေမေတို့က ကာတွန်းကားမကြည့်ကြဘူး ။ ခုတော့ ကလေးလေး ဗိုက်ထဲမှာ ရှိလို့ ပျော်ပါစေ ဆိုပြီးကြည့်ကြတာ ။ :)
ဖေဖေနဲ့မေမေ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကို silient လုပ်ထားကြတော့ ဆေးစစ်တာ အကျိုးအကြောင်းသိချင်တဲ့ Aunty Madel နဲ့ Aunty Ambar တို့က ဖုန်းခေါ်မ၇ လို့စိတ်ပူ စိုး၇ိမ်ကြ သတဲ့လေ။
ဒီနေ့တော့ ငွေကလဲကုန် ၊ဒါပေမဲ့ အားလုံးကောင်းဆိုတော့ " ဟမ်း ! ကောင်းမှကောင်း!!! တဲ့နေ့လေးပေါ့ ။
Posted by Thandar Lwin at Thursday, September 30, 2010 No comments:
ကလေး လေး.........၇ ပတ်
ဒီအပတ်တော့ Singapore National Day ကြောင့် ရုံးသုံး၇က်ပိတ်တယ်ကွဲ့။
စနေနေ့မှာတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ East Coast မှာညစာသွားစားကြတယ်။ sea food ပေါ့။ ထမင်းကမာတော့ မေမေက အကင်တွေချည်း ဖိစားတာဘဲ။
မေမေ စားသောက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ သူငယ်ချင်းတွေ လာပြီးအကြော် ကြော်ကြွေးကြတယ်။မေမေလဲစားလိုက်တာ။ စားပြီးဗိုက်လေးလေးနဲ့ နားကြ၊စကားပြောကြနဲ့၊ပြီးတော့ East Coast , CGTI gathering ကိုသွားကြမယ်လေ။ အဲဒီမှာလဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားတွေပြောလိုက်၊စားလိုက်နဲ့ ဟုတ်နေတာ၊ အပြန် ကလေးအဖေကလာကြိုတယ်လေ။
တနင်္လာနေ့မှာလဲ မနားပါဘူး။ Fort Canning park မှာလမ်းပြကြယ် ၇ဲ့စာပေဆွေးနွေးပွဲရှိတယ်လေ။ ဒီလ ဂျူး၇ဲ့ သူမင်းကို ဘယ်တော့မှ စာအုပ်ကို ဆွေးနွေးကြတာ။မေမေ၇ယ်တောင်ကိုတက်တော့ အလှူပ်အရှားများလို့ကလေးများပင်ပန်းနေမလားစိုး၇ိမ်နေသေးတယ်။ ပြီးအောင်မနေခဲ့ ပါဘူး။ညနေစောင်းတာနဲ့ပြန်ခဲ့တယ်။ Peninsula plaza ဝင်ပြီးညနေစာ မာလာဟင်းဝယ်လာတယ်။
မေမေတို့ေ၇ာက်တဲ့အချိန် national day celebration က singapore flag ကို flight နဲ့လှည့်ပြနေတယ်။ ခဏနေ တော့ fighter jets သုံးကောင် အမြင့်ကိုထိုးတက်သွားတယ်။
သက်သာချင်လို့ အိမ်ပြန်တာ ကားစီးခါမှ လမ်းတွေပိတ် လို့ကြာလိုက်တာကွယ်။ ဗိုက်ဆာလို့စားမယ် လုပ်တော့ ကလေးအဖေက မာလာဟင်းကစပ်လို့ မစားခိုင်းဘူး။ ဘာမှလဲ လုပ်မစားချင်တော့တာနဲ့ ဝမ်းဟာဟာနဲ့ အိပ်ခဲ့၇တယ်။ ဘွားဘွားသာရှိ၇င် စားကောင်းမဲ့ တခုခုတော့ လုပ်ပေးမှာဘဲ လို့တွေးနေမိတယ်။
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, August 18, 2010 No comments:
ကလေး လေး.........၆ ပတ်
ကလေး လေးေ၇... ဒီအပတ်ကတော့6ပတ်ဆိုတော့ morning sick ကစပြီလေ။ မနက်ဆိုသတိအနေအထားနဲ့ေ၇လေးတောင်မှမသောက်
၇ဲဘူး။ ဘာမှမရှိတဲ့ အစာကို အန်၇တာဆိုတော့ ၇င်ထဲမှာ အသဲတွေ အူတွေ ပြောင်းဆန်ပြီး ကြွေကျတော့မလားအောင်းမေ့၇တယ်။လှူပ်တာနဲ့ ၇င်ထဲကတလှပ်လှပ်နဲ့ဆိုတော့ အိပ်ယာထဲမှာဘဲ ဖက်လုံးလေးကိုဖက်ပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးနေ၇တယ်။
ကလေးအဖေကတော့ အိပ်ယာပေါ်မှာနေတာများလို့မူးတာနေမှာ၊ ထ မျက်နှာသစ်ပြီး ဘု၇ားရှိခိုး လို့ခိုင်းတယ်လေ။ ဘယ်လိုခံစား၇တယ်ဆိုတာကို သူမှကိုယ်ချင်းမစာနိုင်တာကိုနော်။
မေမေ့မှာတော့ မစားချင်မသောက်ချင် ဝမ်းနဲသလိုနဲ့ ကလေးမှာလဲ အဟာ၇လိုမှာစိုး၊ စိတ်အားငယ်တတ်တဲ့ အခံလေးပါလာမှာစိုးနဲ့။ အထူးသဖြင့် မခံနိုင်တာက ငါးညှီနံ့ပါဘဲ။ ကိုယ်တိုင်မချက်တောင် သူများချက်တဲ့အ နံ့၇၇င် ဥသြဆွဲတော့တာဘဲ။ ထူးထူးခြားခြားစားခြင်တာကတော့ေ၇ခဲမုန့်ပါဘဲ။
ကလေး အဖေကတော့ သားလေးဖြစ်စေချင်သတဲ့။ မေမေကတော့ ဘာလေးဖြစ်ဖြစ် နောက်တစ်ယောက်မှ မတူတာလေးဖြစ်လို့တွေးနေမိတယ်။
မေမေ့ ဆီမှာ ကလေးလေး ရှိနေပြီဆိုတာ 27 July 2010 မှာသိခဲ့၇တယ်။
ကလေးလေး ၇ဲ့ ဖေဖေကတော့ အ၇မ်းပျော်နေခဲ့တာပေါ့။ ချက်ချင်းဘဲ ကလေး၇ဲ့ ဖွားဖွားဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီးပြောခဲ့တယ် ။ဖွားဖွားကလဲပျော်နေတော့တာပေါ့။ပြီးတော့ဦးဦးကျော်ကြီး ဆီကိုဖုန်းဆက်ပြောပြန်ေ၇ာ။
ကလေး၇ဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေကို၇စ်ပတ်မဲ့ သံယောဇဉ်လေး ရှိလာပြီလေ။ မေမေလဲဝမ်းသာတာပေါ့ကွယ်။
ဒါပေမဲ့ မေမေ့ မှာ အခုမှ အလုပ်သစ် ပြောင်းခါစ၊ အတည်တကျဖြစ်အောင်ကြိုးစားဆဲကာလဆိုပါတော့ကွယ်။ကလေးေ၇ာက်လာတော့အလုပ်သစ်မှာ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့မေမေ အရှိန်တန့် သွားတယ်။ ကလေးကိုပင်ပန်းမှာ စိုးလို့ပေါ့ကွယ်။
မေမေကစိတ်အားလဲငယ်တတ်တယ်ကွဲ့၊ ဘွားဘွားနဲ့ပင်လယ်ကြီးခြားပြီးနေ၇တာလေ။အော့ချင်အန်ချင် ပင်ပန်းလို့မှ ဘာလေးစား ဘယ်လိုနေ ဆိုပြီးယုယ မဲ့သူ မရှိတာကိုး ။ ကလေး၇ဲ့ဖေဖေကလဲ ဂရုတော့ စိုက်ချင်ရှာပါ၇ဲ့။ဒါပေမဲ့ သူက မနက် 63း0 ကနေ ညနေ 73း0 ထိမေမေ့ဘေးမှာမရှိဘူးလေ။
ကလေး ကခုမှ ငါးပတ်ဆိုတော့ အော့ချင်အန်ချင်က သိပ်မဖြစ်သေးဘူးလေ။ အဓိက ကတော့ အိပ်လို့မပျော်တာဘဲ။ မေမေ့ မှာမနက်ဆို အိပ်ေ၇းမဝဘဲ မူး၇ိပ်၇ိပ် နဲ့ အလုပ်ကိုသွား၇တယ်။ အိပ်ပျော်အောင် အားဆေးလဲမသောက်၇ဲဘူး၊ ကလေး၇ဲ့ အစတည်နေတဲ့ ကာလမှာ မလိုအပ်တဲ့နေ၇ာမှာ မလိုတဲ့အားတွေ တိုးသွားမှာ စိုးရိမ်တာကိုး ။
Posted by Thandar Lwin at Friday, August 06, 2010 1 comment:
အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ၇တနာလေးရဲ့ ပုံရိပ်များ.......
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, July 14, 2010 No comments:
အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ၇တနာလေးရဲ့ ပုံရိပ်များ........
ဝေဒနာကြောင့် နာနေတဲ့သားလေး၊ မျက်နှာလေးကကြည်တုန်းဘဲ။
သားလေးခွဲပြီး တော့ မေမေအပြန် လေဆိပ် မှာ...
မေမေ မင်းချန်းမှာ နာ၇ီရှိတယ် သားသားမှာမရှိဘူးဆိုလို့ ဝယ်ပေးခဲ့၇တယ်။ 8.12.2008 ကပေါ့။
ဖေဖေမေမေနဲ့သား ၊ မိသားစု။
သားလေးနှနှစ်ပြည့် ဘိုးဘိုးဘွားဘွား တို့နှင့်အတူ။ ဒီအချိန်ထိသားလေးဘာမှမဖြစ်သေးဘူး ။
အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ၇တနာလေးရဲ့ ပုံရိပ်များ.........
စားလိုက်တဲ့သား ၊ ဖေဖေေ၇ ရှာနော်များများ။
တစ်နှစ်လေးလ သား၊ မားမားမတ်မတ် သွား .....
သကြန်မင်းသားကြီးလေ၊ 2008 ခုနှစ်မှာပေါ့။
အမေတူတဲ့ သားက ဆိုင်းသံကြား၇င်မနေနိုင်ဘူး ၊ ကချင်တယ်။
အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ၇တနာလေးရဲ့ ပုံရိပ်များ
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, July 14, 2010 1 comment:
ညီမလေးတစ်ယောက်ရဲ့ facebook မှာ သူတို့ ချစ်သက်တမ်းနှစ်ပတ်လည် အတွက် ဆုတောင်းလေး ကိုတွေ့ရတယ်။ နောင်နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ထိချစ်ပါတဲ့.........
တကယ်တော့ ဝင်းဝင်းလတ် ရဲ့ အချစ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ စာမျက်နှာ ထဲက သက်ဇော်နိုင် ပြောသလို အချစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကတော့ မေတ္တာရယ်၊ အကြင်နာရယ် ပြီးတော့ သံယောဇဉ် လေးတွေ ရယ် ........
ချစ်ပြီးလို့ နှစ်ယောက်တစ်ဘဝ ထူထောင်ကြမယ်ဆိုရင် တယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်လို့ ရင်ဆိုင်ရမဲ့ အရာတွေက အများကြီးပါ။
သံယောဇဉ် လေးတွေရှိလာလို့သူတို့အတွက်ဘဝကိုပေးဆပ်ရင်း အနည်းဆုံး 25 နှစ်ကတော့ အချစ်ကိုရှေ့တန်းမပို့နိုင်တော့ဘူးပေါ့ ။
စာနာ နားလည်မှူလေးတွေနဲ့ ခရီးဆက်ကြတယ်။
သူတို့လေးတွေ အတောင်စုံလို့ ကိုယ့်ဆီကပျံသွားမှ ကိုယ့်နှစ်ဦးအချစ်ကိုမေတ္တာဆင်.ပြီး အကြင်နာပေးနိုင်တာပါ။
ဒီတော့ နောင်နှစ်လေးဆယ်ဆိုတာ နှစ်ဦးသားရဲ့ ချစ်မေတ္တာလမ်း အစဘဲ ရှိပါသေးတယ်ကွယ်။
အမကတော့ အို နာ သေ ဆိုတဲ့ မလွဲမသွေ တွေ့ရမယ့် ဝေဒနာတွေကို ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာ ချစ်ခင်အားကိုးရသူကို အနားမှာ ရှိစေချင်ပါတယ်။ ဖေးမကူညီ နှစ်သိမ့်ပေးစေချင်တာပေါ့လေ။
အတူနေဘူးတဲ့ ညီမလေးအတွက် အမှတ်တရ။
Posted by Thandar Lwin at Wednesday, July 14, 20104comments:
ဒီနေ့အတွက် ကျေးဇူးကိုတော့ ရှင့်ကိုဘဲ ဦးဦးဖျားဖျား တင်လိုက်ပါတယ် ။
Posted by Thandar Lwin at Tuesday, June 15, 20105comments:
အပြီးတိုင်ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ ၇တနာလေးရဲ့ ပုံရိပ်များ...